विश्वकपको असर चलचित्रमा औसत परेको छः मनिश सुन्दर श्रेष्ठ नायक
नेपाली चलचित्र तिमि हुन्छौं जहाँ जहाँ गत असार ८ गतेबाट सार्वजनिक प्रदर्शनमा आएको छ । चलचित्रमा मुख्य भूमिकामा रहेका मनिष सुन्दर श्रेष्ठ यो चलचित्रबाट निकै आसाबादी देखिएका छन् । डेब्यु चलचित्र रानी बक्सअफिसमा पूर्ण रुपमा असफल भएपछि उनलाई दोस्रो चलचित्र चल्नै पर्ने दवाब पनि छ । प्रदर्शनको सुरुवाति समयमा चलचित्रलाई दर्शकले रुचाएका छन् । चलचित्र हेर्ने दर्शकबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको बताउने मनिश चलचित्रको माउथ अफ पब्लिसिटि राम्रो भएकोले अवका दिनमा दर्शक बढ्ने अपेक्षा गर्दछन् । यसै सेरोफेरोमा रहेर चलचित्र तिमि हुन्छौं जहाँ जहाँका नायक मनिश सुन्दर श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
तपाई अभिनित दोस्रो चलचित्र तिमि हुन्छौं जहाँ जहाँ कस्तो चलचित्र हो ?
यो लभस्टोरी चलचित्र हो । आफुले मन पराएको मान्छेलाई पाउन मान्छेले के कस्तो संघर्ष गर्दछ भन्ने कुरालाई चलचित्रले कलात्मक रुपले देखाउने प्रयास गरेको छ । साथै प्रेममा आईपर्ने संघर्ष र द्धन्दलाई पनि चलचित्रले समेटेको छ ।
चलचित्र प्रदर्शनमा आईसकेको छ । कस्तो प्रतिक्रिया पाईरहनुभएको छ ?
एकदमै सकारात्मक प्रतिक्रिया पाईरहेको छु । मेरो पहिलो चलचित्र रानीले अपेक्षित सफलता नपाएपछि अर्को चलचित्र कस्तो होला भन्ने चिन्ता निकै लागेको थियो । रानीले बक्सअफिसमा राम्रो कलेक्शन नगरे पनि युट्युवबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाएको थियो । मेरो कामलाई पनि दर्शकले निकै रुचाईदिनुभयो । युट्युवबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाएपछि केहि उत्साह म मा थपियो । चलचित्र तिमि हुन्छौं जहाँ जहाँको शुरुवाति प्रतिक्रियाले थप उत्साहित बनाएको छ । चलचित्र हेर्ने दर्शकले रुचाईदिनुभएको छ ।
चलचित्रकै नायिका मलिना जोसीसँगको प्रेम सम्बन्धका कुराहरु पनि आईरहेका छन् । बास्तविकता के हो ।
मलिना जोशी चलचित्र क्षेत्रमा म भन्दा धेरै सिनियर कलाकार हुनुहुन्छ । वहाँसँग चलचित्र रानी र तिमि हुन्छै जहाँ जहाँमा लगातार काम गर्ने अवसर पाए । चलचित्र क्षेत्रमा जो कोहिसँग पनि दोहार्याएर काम गर्दा नाम जोड्न चलन छ । हामी दुईको सम्बन्धको कुरा पनि त्यहि चलनको निरन्तरता मात्र हो । यो हल्लामा कुनै सत्यता छैन ।
विश्वकपको माहौलको बेला चलचित्र प्रदर्शनमा आयो । यस्ले चलचित्रमा असर पारेको छैन ?
पक्कै पनि धेरै थोरै असर त परिनै हाल्छ । तर नेपाली समय अनुसार साँझ मात्र फुटबल खेलहरु शुरु हुने भएकोले धेरै असर नगर्ला भनेर नै यहि बेला चलचित्र प्रदर्शनमा ल्याईएको हो । भारतमा आईपिएलको बेला प्रदर्शनमा आएका चलचित्रले राम्रो कलेक्शन गर्न नसकेका समाचारहरु आईनै रहन्छन् । नेपालको हकमा औसत असर त परेकै हुन्छ । तर वल्र्डकप भएकै कारण दर्शक हलमा नै नआउने भने भएको छैन । बेलुकिको शो हरुमा सामान्य असर भने देखिएकै छ ।
तपाई फुटबल चाहि कत्तिको हेर्नुहुन्छ ? कुन देशको सपोर्ट गरिरहनुभएको छ ?
समय मिलेसम्म विश्वकप फुटबलका खेलहरु नछुटाई हेर्ने गर्दछु । पहिला पहिला मैले ब्राजिललाई समर्थन गर्ने गर्दथे । अघिल्लो दशकमा ब्राजिलसँग निकै राम्रा खेलाडीहरु पनि थिए । तर अहिले मलाई ब्राजिलले मन जितेको छैन । अहिले मैले पोर्चुगलको समर्थन गरिरहेको छु । मनपर्ने खेलाडी पनि पोर्चुगलकै क्रिष्टियानो रोनाल्डो नै हुन् ।
तपाईको अवको योजना के छन् ?
चलचित्र क्षेत्रमै रमाईरहेको छु । यहि क्षेत्रमा भविष्य खोज्नेछु । चलचित्रका अफरहरु त आईनै रहेका छन् । तर पनि तिमि हुन्छौं जहाँ जहाँको प्रतिक्रिया हेरेर अगाडि बढ्ने योजना छ । रानीमा भएका गल्तिहरु तिमि हुन्छै जहाँ जहाँमा सुधारेको छु । दर्शकको प्रतिक्रिया र सुझाव अनुसार आगामि चलचित्रमा सुधार गर्दै जानेछु ।
अन्त्यमा दर्शकलाई के भन्नुहुन्छ ?
चलचित्र तिमि हुन्छौं जहाँ जहाँ प्रदर्शनमा आएको छ । विश्वकपको माहोलको बाबजुद समय मिलाएर चलचित्र हेरिदिनुहोला । चलचित्रमा निकै मेहनत गरेको छु । हेरेपछि प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला । रानीमा तपाईहरुले दिएको प्रतिक्रियाअनुसार आफुलाई सुधार्ने प्रयास गरेको छु । यो चलचित्रबाट आएका प्रतिक्रियाले पनि मेरो आगामि यात्रा निर्धारण गर्न सहयोग पुग्नेछ भन्न चाहन्छु ।
क्यारेम र लुडो खेल्न प्रतिबन्ध
पैसा नपाएको भन्दै ठेकेदारले ढिलाइ गर्दा सडक खुलेन
चीन भ्रमणका क्रममा दुइ देशबीच भएका सहमती ऐतिहासीक उपलव्धी :प्रधानमन्त्री ओली
चीन भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकलाई जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री ओली ( Live )